ငှက်တဇပ်ညို - ဝီကီပီးဒီးယား
၁ လှသမိန်ရေးသည့် ဗဟုသုတ စွယ်စုံစာအုပ်မှ ဖော်ပြချက်
၂ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၂)မှ ဖော်ပြချက်
လှသမိန်ရေးသည့် ဗဟုသုတ စွယ်စုံစာအုပ်မှ ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ငှက်တဇပ်ညို (အင်္ဂလိပ်: Brown shrike) (Lanius cristatus) ကို ဝါးရုံငှက်ဟူ၍လည်း ခေါ်သည်။ ငှက်ဘီလူးမျိုးတွင် ပါဝင်သည်။ အလျား ၇ လက္မခွဲခန့်ရှိ၍ ငှက်၏ကိုယ်အောက်ပိုင်းတွင် လခြမ်းသဏ္ဌာန် အစင်းများရှိသည်။ ကွင်းပြင်များ၌ တွေ့ရ၍ ချုံပုတ်ကြားမှ အသံအုပ်အုပ် အော်လေ့ရှိသည်။ ဖျတ်လတ်စွာ ပျံသန်းတတ်သည်။ ဆိုက်ဘေးရီးယားအရှေ့ပိုင်း၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ မန်ချူးလီးယားနှင့် တရုတ်ပြည်တို့တွင် တွေ့ရှိရသည်။ တောင်မြင့်များပေါ်၌ ကူးသန်းသွားလာတတ်သည်။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၁၂)မှ ဖော်ပြချက်[ပြင်ဆင်ရန်]
ဝါးရုံကြက်သည် ပက်စာရီဖောမီးမျိုးစဉ်တွင် လာနိုင် အီဒီးမျိုးရင်း၌ ပါဝင်၍ ယင်းကို ပါဏဗေဒအလိုအားဖြင့် လန်နိယပ် ကရစ်စတေးတပ်ဟုခေါ်သည်။ ဝါးရုံကြက်ကို ငှက်တစ်ဇပ်ဟုလည်း ခေါ် သေးသည်။ ဝါးရုံကြက်၏ အရွယ်မှာ အလျားခုနစ်လက်မခွဲရှိသည်။ ဝါးရုံ ကြက်ငယ်ကလေးများ၏ ကိုယ်ထည်အောက်ပိုင်းတွင် လခြမ်းပုံသဏ္ဌာန် အကန့်များရှိသည်။ ချုံဖုတ်၊ ချုံတောများမှ အသံခပ်အုပ်အုပ် အော်မြည် တတ်သည့်ပြင် မျိုးရင်းတူသည့် အခြားငှက်များကဲ့သို့လည်း စူးရှစွာအော် လေ့ရှိသည်။ အလေ့အထနှင့် အစားအစာမှာ မျိုးရင်းတူငှက်များနှင့် အတူ တူပင်ဖြစ်သည်။ ဝါးရုံကြက်သည် အတင့်ရဲသောငှက်ဖြစ်၍ ခက်ထန်သော ငှက်လည်းဖြစ်၏။ နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်များ၊ ငှက်ငယ်၊ ပျားကောင်၊ နှံ ကောင်၊ ပုစဉ်းကောင်၊ ပိုးတောင်မာ၊ လိပ်ပြာနှင့် ချုံတောများတွင် တွယ် ကပ်ခိုအောင်းတတ်သည့် ပိုးကောင်များကို စားသောက်လေ့ရှိသည်။ ဖားငယ် များကို အရှင်လတ်လတ် ဖမ်းယူပြီးလျှင် နားရာသစ်ပင် သို့မဟုတ် ချုံဖုတ် များသို့ ယူဆောင်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ယင်းတို့ကို ဥယျာဉ်များ၊ သစ်ပင်ကင်းရှင်းသည့် မြေပြန့်များ၊ ချုံဖုတ်များတွင် မကြာခဏ တွေ့ရ သည့်ပြင် ကြေးနန်းကြိုးနှင့် ဝရံတာလက်ရန်းများပေါ်တွင်လည်း နားနေ တတ်သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ရန်ကုန်မြို့နှင့် အနီးတစ်ဝိုက်တွင် ဝါးရုံကြက် အော်မြည်သံကို တစ်နေ့လုံး ကြားရတတ်သည်။
ဝါးရုံကြက်သည် ဆိုက်ဗီးရီးယား အရှေ့ပိုင်း၊ မွန်ဂိုးလီးယား၊ မန်ချူးရီးယားနှင့် တရုတ်နိုင်ငံ အချို့အရပ်ဒေသများတွင် သားပေါက်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် တောင်ပိုင်းဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ကျက်စားတတ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ဝါးရုံကြက်ကို တွေ့ရခဲသော် လည်း ဆောင်းဦးပေါက်အချိန်တွင် စက်တင်ဘာလမှ အောက်တိုဘာလအထိ တွေ့ရ၍ တစ်ဖန် မတ်လမှ မေလထိ တွေ့ရတတ်သည်။ ဆောင်းရာသီတွင် ဝါးရုံကြက်အချို့ကို လွင်ပြင်များတွင် တွေ့ရသည်။ ဇွန်လတွင် ယူနန်နယ် အနောက်ပိုင်း၌ ပေ ၆ဝဝဝ မှ ၈ဝဝဝ အထိမြင့်သည့်ဒေသတွင် တွေ့ရ သည်။ စက်တင်ဘာလလောက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ လာရောက်ကျက်စား သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ လွင်ပြင်များမတွင် အနှံ့ အပြားတွေ့ရတတ်သည်။ ရခိုင်တိုင်းတွင်လည်း စက်တင်ဘာလမှ မေလအထိ အတွေ့ရများသည်။ ရှမ်းပြည်တွင်မူ ဧပြီလအထိ ဝါးရုံကြက်များကို တွေ့ရ တတ်ပေသည်။
Immature feeding in Kolkata, West Bengal, India.
↑ BirdLife International (2012). "Lanius cristatus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်တဇပ်ညို&oldid=718842" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။